EXCLUSIVE SAADAAL MEDIA DHAGEYSO:- Barnaamij Gaar ah oo uu marti ku yahay mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya + Mooshinka
Ku soo dhowaada dhageystayaal meel walba oo aad joogtaan Barnaamij gaar ah oo SAADAAL MEDIA ay ku qabatay golaha Baraarujinta iyo siyaasada oo ay ku mideesanyihiin kumanaan kun oo qofood ...
DAAWO: Madaxwayne ku xigeenka Puntland Cabdixakiiin Camey oo ka hadlay Garsoonka iyo Cadalada
TOOS U DHAGEYSO:-Xildhibaan Jamac Axmed oo Marti ku ahaa Golaha Wacyigalinta iyo Siyaasada Arimo badana ka hadlay
Xildhibaan Jamac Axmed oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo haatan ku sugan Muqdisho ayaa wuxuu la hadlay Golaha Wacyigalinta iyo Siyaasada oo ah gole ay ku mideesanyihiin kumanaan kun Soomaali ...
DHAGEYSO:- Magaalada Caabudwaaq oo laga sameeyay hormar ganacsi oo wanaagsan
Magaalada Caabudwaaq Ee Gobalka Galgaduud ayaa hormar ka samaysay dhanka Ganacsiga iyadoo mudooyinkii dambe Magaaladu ay ahayd mid dhan walba hormar ka samaysay. Waxaa magaalada gaarayay dad ay ku jiraan qurba-joog dib u ...
DAAWO VEDIO: Madaxweyne Xasan oo la kulmay Saraakiil ka socotay Midowga Afrika “Maxay kala hadleen”?
DAAWO SAWIRADA:- Wafdi ballaaran oo lagu soo dhoweeyay magaalada Buuhoodle
Waxaa maanta ka degay magaalada Buuhoodle wafdi ballaadhan oo uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka Khaatuma Cabdalla Cagalule iyo Garraad Jaamac iyadoo si weyn loogu soo dhoweeyay halkaasi. Waddooyinka waa weyn ayaa ...
TOP DAAWO: Amiin Caamir oo sawir la yaab leh ka sameeyay Xasan & Cabdiweli ”Qaniinyo ayaa qaniinyo kaa fujisa)!
DHAGEYSO: Wafdi ka socday magaalada Baydhabo oo gaadhay Garoowe iyo kulamo ay ka qeyb galeen
Wafdi ka socda magaalada Baydhabo ayaa maanta gaaray magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland. Masuuliyiintani waxaa Garoowe ku soo dhoweeyay wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Axmed Karaash waxaana ay ka qeyb ...
TOP DAAWO: Hees cajiib ah oo laga sameeyay mooshinka RW Cabdiweli, MD Xasan + VEDIO
Muuqaalkani soo socda ee cajiibka ah ayaa laga sameeyay mooshinka ka dhanka ah Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Cabdiweli Sheekh Axmed. Heestani ayaa lagu cabiray xaaladda uu hadda dalka marayo iyo sida ...
LIVE DHAGEYSO: Xildhibaan Ubax ”Mooshinka waa la aqbalay waana sharci runtii…”
Xildhibaan Ubax Tahliil Warsame oo ka mid ah baarlamaanka wada mooshinka ka dhanka ah Raysal wasaarah ayaa sheegtay inay guuleysteen oo mooshinka la guda gali doono. Waxa ay sheegtay xildhibaanadaasi go’aankooda ...